Si fudud Split / Goo / goo MKV Files in Windows / Mac
> Resource > Beddelaan > Sida loo Split / Goo / goo MKV Files in Windows / Mac
"Sidee in aan kala tagno .mkv files aan dib-u-Deji ?? waxaan ula jeedaa tayo la mid ah sida saxda ah ka hor." -Pitorasilo
Ma doonaysaa in aan kala tagno file weyn MKV qaybo badan oo aan laga badinin tayada video? Haddii ay sidaas tahay, qodobkan waa uun idiin, soo bandhigidda barnaamij MKV awood badan qaybsama oo kaa caawin kara inaad kala files MKV tayo sameecadda ah. Taasi Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ee Win (Windows 8 taageeray) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ). Waxaan sharad aad noqon doontaa wacdaro ay shaqada awood iyo tayo wanaagsan leh. Hel faahfaahin ah oo ku saabsan sida loo kala qaybsan tahay files MKV hoos ku qoran.
Easy in la isticmaalo MKV Splitter: Filmora Wondershare (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Iska yaree MKV in dhererka kasta oo aan khasaaro tayada wax.
Split off qayb kasta oo ka mid MKV videos aad.
Real-waqtiga shaqada Falanqeynta gelineya inaad aad si sax ah u gooyay clips rabin effortlessly.
Save file MKV aad qaabab kala duwan, gubi in DVD ama si toos ah online geliyaan.
1. Import MKV files in this splitter MKV
Download iyo rakibi this smart MKV video splitter. Ka dib waxa socda, waxaad dooran kartaa 16: 9 ama 4: 3 ratio doorasho galo interface ugu weyn ee tan splitter file MKV.
Markaas dajiyaan aad files MKV deegaanka si ay app this. Waxaad riix kartaa "Import" doorasho inay ku shuban files MKV ama si toos ah jiidi files MKV kombiyuutar si ay album.
2. files Split MKV
Jiid aad file MKV uu ka rabo album in ay Timeline ah. Ka dibna waxaad leedahay laba hab oo kala file MKV ka dib markii aad u dooro:
1. jiid bar slider iyo sare ee Tusiyaha cas ay u guuraan Tusiyaha in ay meesha saxda ah aad rabto ka dibna riix badhanka maqas ah. Waxaad dareemi doontaa faylka MKV wayn oo loo kala qaybiyay laba qaybood. (Fadlan ogsoonow: waxaad u baahan tahay in ay doortaan video ah ka hor inta uusan Tusiyaha oo ay u riixaya.)
2. Si toos ah jiidi mid video clip in booska saxda ah meesha aad rabto in aan kala tagno file MKV ah, ka dibna ay tirtirto mid ka mid ah daray (maxaa yeelay, markaan waxaad ku dari noqnoqashada video clip ah oo kale, video ah ka dib si toos ah kala qeybin doonaa). Dabcan, waxaad isticmaali kartaa sidan ku darto video clip kala duwan ee file MKV haddii loo baahdo.
3. Dhoofinta hal MKV clip
Delete clips kale MKV oo kaliya ka tago MKV hal clip ah. Ka dib markii in, riix "Abuur" button in arbushin ilaa uu furmo suuqa wax soo saarka, ka dhacay tab Qaabka ah, ka dibna dooro MKV inay u dhoofiyaan MKV hal clip ee ka mid file.
Fur mashruuca isla inuu ku celiyo shaqada delete iyo dhoofinta. Sidaas, waxaad samayn kartaa clip kasta MKV in file fudud.
Video Tutorial: Sida loo Split MKV Video Files
Sida loo Edit MKV Videos in Windows iyo Mac
Sidee ku cadaadisaa MKV Video Files
Sida loo soo biir MKV Video Files
Sida loo dar subtitles in MKV